Cooking Art, Myanmar Dishes. - PALnet
Cooking Art, Myanmar Dishes.
Hello dear friends, this isacooking art by me.
Today I would like to share my cooking fish curry. It has not been posted foralong time these days. Because I'm struggling with some of my problems. Today I would like to shareafish dish. Do you eat fish cooked in this way in your country? This isaBurmese food. The taste is carefully cooked according to the Mon diet. It isafish soup.
First of all, let me tell you what you need to cook fish. Then I will tell you how to cook. The recipe steps are also simple. If you like Mon food, you can cook it. I hope this post helps you.
These are the ingredients. These are easily available in your store and at the market. For Myanmar. Do you use this kind of spice in your country?
Fish 0.5 Kg
About 10 hot peppers
6 pods of green chillies
Shan Pin Sein.
Rinse the fish you buy at the market with water. Fish spines and heads; The tails must be cut off. Then rinse again with water and cut into small pieces. Add salt, Spice powder and tumeric powder to taste.
Onion, paste garlic, Mix the chilli powder and grind inamortar. Add dried Mayan Thee (myanmar name ) to taste. Add the green chillies as the fish isaspicy dish. Once all the ingredients are mixed and ground, you get the essence of the curry.
This is the last step. Put the salted fish in the pot. Stir in the herbs. Then addalittle water. Do not overflow. This is because water comes out of the fish's body when it is cooked. Addalittle water and bring to the boil. When the water is hot and the fish is ready to cook, add SHAN GREEN LEAF. Cook for another5minutes and you will haveadelicious fish dish.
Fish curry isakind of curry. It is usually cooked and eaten asasoup. The taste of fish is sweet and tender. It is often cooked asatraditional Mon dish. Fish stew isadelicious and popular dish.
I wish all my readers good health and happiness.
ဒီရက်ပိုင်း Post တွေ မတင်ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ငါ့ရဲ့ တချို့အခက်အခဲတွေအတွက် ကြိုးစားနေရလို့ပါ။ ဒီနေ့တော့ ငါးဟင်းချက်ထားတာလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ နိုင်ငံမှာတော့ ငါးကို ဒီလိုမျိုး ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ် စားသောက်ပါသလား? ဒါက မြန်မာ အစားအစာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မွန် လူမျိုးတို့ ရဲ့ စားသောက်ပုံအတိုင်း ချဥ်ချဥ် စပ်စပ် အရသာ ကို ချက်ပြုတ်ထားပါတယ်။ ငါးနှပ် ချဥ်စပ် ဟင်းချို ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ငါးဟင်းချက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ဘယ်လို ချက်ပြုတ်ရသလည်းဆိုတာ ပြောပြပေးပါမယ်။ ချက်ပြုတ်နည်း အဆင့့်ဆင့့်ကိုလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ရေးသားထားပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ မွန်အစားအစာ ကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ Post လေးက မိတ်ဆွေတို့ကို အကူအညီ အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့့်ပါတယ်။
ဒါတွေက ပါ၀င်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မင်း စတိုးုးဆိုင်နဲ့ စျေးမှာ အလွယ်တကူ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ပေါ့။ မင်းနိုင်ငံမှာကော ဒီလို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ သုံးစွဲပါသလား?
ငါးနှပ် 0.5 Kg
ကြက်သွန်ဖြူ6pcs
ကြက်သွန်နီ2pcs
ငရုပ်ကောင်း ၁၀ စေ့ခန့့်
ငရုပ်သီးစိမ်း ၆ တောင့်
စျေးမှ၀ယ်ယူလာသော ငါးကို ရေဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပါ။ ငါး၏ အဆူးတောင် များနှင့် ခေါင်း ၊ အမြီး တို့ကို ဖြတ်ထုတ် ရပါမည်။ ထို့နောက် ရေဖြင့် တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ဆေးကြောပါ။ပြီးလျှင် အပိုင်းငယ်လေး များဖြစ်အောင် ခုတ်ထစ်ရပါမည်။ ခုတ်ထစ်ပြီးသော အပိုင်းငယ်လေးများကို ဆား အနည်းငယ်၊ ဟင်းခတ်မှုန့် ဇွန်းသေးတစ်ဇွန်း ၊ နနွင်းမှုန့် တို့ဖြင့် ရောနယ်ပြီး ခဏ သိမ်းထားရပါမည်။
ဟင်းအနှစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် တို့ကို ရောနှော၍ ဆုံတွင် ထည့်ကြိတ်ပါ။ အချဥ် အရသာ အတွက် မရမ်းသီးအခြောက် ကို ထည့်ပါ။ ငါးမွန်ချက်သည် ချဥ်စပ်ဟင်း ဖြစ်သောကြောင့် ငရုပ်သီး စိမ်းများ ထည့်ထောင်းပါ။ အားလုံး ရောနှော ထည့်ကြိတ်ပြီးလျှင် ချဥ်စပ်ဟင်း အတွက် ဟင်းအနှစ်ကို ရရှိပါပြီ။
နောက်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆားနယ် ထားသော ငါးကို အိုးထဲသို့ ထည့်ပါ။ ဟင်းအနှစ် ကို ရောနယ် ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေ အနည်းငယ် ထည့်ပါ ။ ရေ မများပါစေနှင့်။ အဘယ်​ကြောင့်ဆိုသော် ငါးနှပ်အား ချက်လျှင် ငါး၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေပြန်ထွက်လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီးလျှင် ဆူပွက်အောင် ချက်ပြုတ်ပါ။ ရေများပူလာပြီး ငါးဟင်း ကျက်ရန် အသင့်ဖြစ်သောအခါ SHAN GREEN LEAF ကိုထည့်ပါ။ ၅ မိနစ် ခန့် ထပ်မံ ချက်ပြုတ်ပြီးလျှင် အရသာရှိသော ငါးဟင်း တစ်ခွက်ကို ရရှိပါပြီ။
ငါးနှပ် ဟင်းသည် ဟင်းအဖြစ်တစ်မျိုး ၊ ဟင်းအရည်အဖြစ် တစ်မျိုး ချက်ပြုတ်စားသောက်လေ့ရှိပါသည်။ ငါး၏အရသာမှာ ချို ပြီး နူးညံ့ ပါသည်။ မွန် ရိုးရာ အစားအစာ တစ်ခုအဖြစ် ချဥ်စပ် အရသာ ချက်ပြုတ်လေ့ရှိပါသည်။ ငါးနှပ် မွန်ချက်သည် အရသာ ကောင်းမွန်ပြီး နာမည်ကြီး အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ အပေါင်း ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ကြပါစေ။
hive-120586 neoxian proofofbrain trafficinsider creativecoin palnet cent archon tokenlist
ဝိုး စားချင်စဖွယ်ပါ။ ငါးနှပ် မွန်လက်ရာ ဆိုပါတော့။
အိမ်မှာတော့ ငါးဆို ကြော်ပြီး ခရမ်းချဥ်သီး နဲ့ချက်တာပိုကြိုက်တယ်။
naythan tipped ong.aye.myat.mon (x1)
nyinyiwin tipped ong.aye.myat.mon (x1)
myanmarkoko tipped ong.aye.myat.mon (x1)
@ong.aye.myat.mon(5/10) tipped @htwegyi (x1)
htwegyi tipped ong.aye.myat.mon (x1)
This is really cool! What sort of fish is that? It looks really scary!
သွားရည်တောင် ကျလာပီ။ စားချင်လိုက်တာနော်။ 😃 !PIZZA
ကြည့်ရုံနဲ့တင် စားချင်စရာပါပဲ !PIZZA ဟင်းချက်တော်တယ်နော်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးထွေး !PIZZA